Cheap Chain Plate Organic Waste Composting Turner Machine ine Hydraulic Kudzora Sisitimu Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Chain Plate Composting Turner Machine?
Iyo Chain Plate Composting Turner Muchina ine dhizaini inonzwisisika, mashoma simba rekushandisa mota, yakanaka yakaoma kumeso giya yekudzora yekutapurirana, yakaderera ruzha uye kugona kwakanyanya. Makiyi akakosha akadai se: Cheni uchishandisa mhando yepamusoro uye yakasimba zvikamu. Hydraulic system inoshandiswa kusimudza uye kudzikisa, uye kudzika kwekudzoka kunogona kusvika 1.8-3 metres. Chinyorwa chakasimudza kukwirira kunogona kusvika 2 metres, kugara mumhepo kwenguva yakareba, pasina aeration, mamwe mafomu e dumper anogona kuita matatu ekumisikidza matangi, uchishandisaChain Plate Composting Turner Muchina, imwe yakwana.
Chii chinonzi Chain Plate Composting Turner Muchina unoshandiswa？
1. Uchishandisa cheni dhiraivha, kutenderera kutsigira kweiyo pallet dhizaini, flip kuramba kuchengetedza simba, yakakodzera kune yakadzika groove kushanda.
2. Flip-up pallet yakagadzirirwa tension inokwenenzverwa uye yakasununguka damping system kuchengetedza iyo yekutyaira system uye kushanda zvikamu uye inoshanda mashandiro.
3.Kufuridza-kukanda pallet kwakagadzirirwa bvisika kusakara kusingachinjiki rakakombama zino blade, kupwanya kugona, zvinhu reactor okisijeni maitiro.
4. Izvo zvinhu zvinogara mupallet kwenguva yakareba, yakakwira yakapararira, uye mweya kusangana neiyo izere, nyore kunaya.
5. Horizontal uye vertical kusimuka kunogona kuwanikwa chero kupi mune iyo slot flip oparesheni, inoshanduka kufamba.
6. Chikamu chekusimudza chinoshandisa hydraulic kudzora system, inochinja basa, yakachengeteka uye inoshanda.
7. Yakareba-renji kure kudzora kwendege kumberi, yakatwasuka switch, flip uye nekukurumidza kumashure uye kumwe mashandiro ekuvandudza mashandiro enzvimbo.
8. Inesarudzo slot yekudyara zvinhu, otomatiki kuburitsa mudziyo, rezuva yekuvirisa mukamuri uye kufefetedza aeration system.
9. Inobatanidza mashandiro ekushandura zvinhu, kudzora porosity, kupa oxygen, uye shanduko yezvinhu.
10. Otomatiki kudzora system ine chengetedzo switch uye kure kudzora.
11. Yakashongedzerwa ne-slot-shift kifaa inogona kuona iyo slotting muchina yakawanda-slot mashandiro, ichichengetedza mari.
Chain Plate Composting Turner Machine Kushanda Nheyo
Iyo inomhanya sisitimu ye Chain Plate Composting Turner Muchina adopts shanduka Frequency kumhanya murau, iyo ine unochinjika zvakanaka kune zvakasiyana zvinhu, kugadzikana kumhanya, kukwirira kwekutendeuka kugona uye yakadzika groove kushanda. Inogona kupfupisa iyo yekuvirisa nguva uye nekuvandudza kugadzirwa kwekuita uye mhando chigadzirwa. Uchishandisa inowirirana frequency kumhanya kufamba system, inogona kunyatso kuchinjika neshanduko mukuita basa.
Chain Plate Composting Turner Machine Model Sarudzo
Chain ndiro yakafara
Kureba kwetangi rekuvira
Kureba kwetangi rekuvirisa
Kunonyanyisa wekushanduka kugona
Kusimuka kwezvinhu pakushanduka kwega kwega
Kunonyanyisa vachisimudza kukwirira
Pashure: Groove Rudzi Composting Turner
Zvadaro: Crawler Type Organic Waste Composting Turner Muchidimbu